Bora Bora, ePolynesia
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeBora Bora
Bukela ividiyo ekhuluma ngeBora Bora
Hlola Bora Bora okuyi uyisiqhingi sentabamlilo e-Society Islands archipelago of French I-Polynesia.
Kungenzeka ngokuphelele ukuzongela into kwelinye lamaholide asezingeni eliphakeme kakhulu futhi usebenzise imali oyilondolozile ensukwini ezimbalwa. Noma kunjalo, ukuhlela kancane kusengaphambili kungavumela ubumnandi bendawo enhle ngesabelomali esiqine. Khumbula ukuthi kunoma yisiphi isimo i-Bora Bora yindawo enentengo enkulu. Konke (i-catering nemisebenzi) kusuka ku-“eqolo” kuya ku- “kubiza ngokungaqondile”.
IBora Bora yisiqhingi eqenjini leLeeward le-Society Islands yaseFrance I-Polynesia, “Izwe Langaphandle Kwaphesheya” elisizwa ngokwezezimali France olwandle lwePacific. Lesi siqhingi sizungezwe udonga lwamachibi nolwandle oluyisithiyo. Maphakathi nesiqhingi kukhona izinsalela zentaba-mlilo eqothulayo ezinyukela eziqongweni ezimbili, iMount Pahia neNtaba i-Otemanu, indawo ephakeme ngamamitha we-727. Igama lokuqala lesiqhingi ngolimi lwesiTahiti lingahunyushwa kangcono njengePora Pora, okusho ukuthi "Ukuzalwa Okuqala".
Imikhiqizo yalesi siqhingi ikhawulelwe kakhulu kulokho okungatholwa olwandle nezihlahla zikakhukhunathi, ezazibaluleke kakhulu ngokomnotho ngokubaluleka kwe-Copra.
Umlando weBora Bora ukhombisa ukuthi abahlali bokuqala besiqhingi emuva ngekhulu le-4th babengabantu besiTonga. Abahloli bamazwe bokuqala baseYurophu abavakashela lesi siqhingi baholwa nguJames Cook. Kodwa-ke, ngaphambi kwalesi siqhingi saseBora Bora kwase kubonakala abanye abahloli.
Namuhla isiqhingi saseBora Bora sincike kakhulu kwezokuvakasha futhi ngenxa yalesi sikhungo sokungcebeleka eziyisikhombisa sakhiwa eminyakeni embalwa edlule. I-Hotel Bora Bora yaba ngowokuqala ukwakha ama-bungalows amile phezu kwamanzi esebenzisa izibiliboco manje ezinikezwa zonke izindawo esiqhingini njengoba lezi zingilizi zinikeza ukubona okuhle kwamachibi nezintaba.
Isimo sezulu esiseBora Bora naseziQhingini eziseduze zithathwa njengezishisayo.
Izilimi eziphambili ezikhulunywa abantu baseBora Bora Island ziyisiFulentshi nesiTahiti yize iningi lezakhamizi ezixhumana nezivakashi ziluqonda kahle ulimi lwesiNgisi. Abavakashi abaningi abavakashela lesi siqhingi bangamaMelika, amaJapan kanye nabaseYurophu.
Isiko elicebile libe nomthelela omkhulu emakethe yezitolo. Abahambi banokukhetha kwabo ngemidwebo yobuciko, ama-studio, izitolo ezisethwe ezilungiselelweni zendabuko nezanamuhla. Baphinde babe nobucwebecwebe obuningi namaparele amnyama.
Isiqhingi sasePolynesia eseningizimu pacific sibalwa phezulu ohlwini uma kukhulunywa ngobuhle obukhulu emhlabeni. Isikhathi esihle kakhulu sokuhamba ngoMeyi. Indlela engcono yokufika ukuthatha indiza yamazwe omhlaba iye Tahiti, bese kuthi indiza engaphansi kwehora iqonde eBora Bora.
Kukhona cishe abantu abayizinkulungwane eziyisishiyagalolunye abahlala eBora Bora. Lababantu banokubambelela ngokuqinile kusiko, izinganekwane namasiko anikezwe kunkulunkulu basePolynesia. Zinezingoma zendabuko nemidanso yesiqhingi. Bayathanda ukuxoxa ngesiko labo nezivakashi. Ijubane libekwe emuva ngesimo sokuphumula. Baphila ngefilosofi ethi 'ezine pea pea' okusho ukuthi 'ukungakhathazeki'. Izilimi eziphambili ezikhulunywa eBora Bora isiFulentshi nesiTahiti. IsiNgisi siyakhulunywa futhi emahhotela amaningi, ezindaweni zokungcebeleka, ezimakethe nasezindaweni zabavakashi.
I-Air Tahiti indiza kaningana ngosuku ukusuka ITahiti. Izindiza zivame ukugcwala, ngakho-ke akuwona umqondo omubi ukwenza ukubhuka.
Isikhumulo sezindiza sitholakala kwi-motu (islet) enyakatho yesiqhingi esikhulu. Ukudlulisela esiqhingini esikhulu noma ezindlini ezihlala kwenye motus kwenziwa ngesikebhe. Izindawo zokuhlala ezinkulu zinezinto zokubala esikhumulweni sezindiza. Ukuze uthole indawo yokuhlala esesiqhingi esikhulu, uzodinga ukuthatha isikebhe (samahhala) esiya eVaitape. Ukusuka lapho, amabhasi amancane ngokujwayelekile azokukulanda. I-Air Tahiti isebenza ngokudluliswa kwesikebhe samahhala kusuka esikhumulweni sezindiza kuya edolobhaneni elikhulu, iVaitape, ngo “Bora Bora Navette”.
Indlela ozungeza eBora Bora incike kakhulu endaweni yakho yokuhlala nendawo okuyo. Izindawo eziningi zokungcebeleka empeleni zitholakala kumotri hhayi esiqhingini esikhulu, yingakho isidingo sokuhamba ngesikebhe ukuya noma kuphi. Ukudluliswa kwesikebhe kusuka kulezo zokungcebeleka kuya esiqhingini esikhulu noma phakathi kwezindawo zokuhlala kanye nesikhumulo sezindiza kuvame ukunikezwa. Izindawo ezitholakala kulesi siqhingi zivame ukuhlinzeka ngokudluliselwa ku-Airport Ferry quay.
Esiqhingini esikhulu, kunendlela eyodwa evaliwe. Ukuthuthwa komphakathi esiqhingini kunomkhawulo, kuhlanganisa ibhasi elilodwa elihamba maphakathi nesiqhingi futhi libuya cishe njalo ngehora. Amatekisi nawo ayatholakala.
Abasebenzisi bemisebenzi nezindawo zokudlela kwesinye isikhathi (kodwa hhayi njalo) bahlinzeka ngokudlulisela nokubuya ezindaweni zokuhlala - qiniseka ukubuza lapho ubhuka.
Ukuqasha ibhayisekili noma i-buggy encane kungaba yindlela uma uhlela ukuba nenkululeko yakho esiqhingini esikhulu, kodwa umgwaqo kwesinye isikhathi umncane kakhulu, futhi usesimweni esibi.
Isiqhingi saseBora Bora empeleni siyindawo eyakhiwe intaba-mlilo. Le geography ikhiqize i-lagoon, evikelwe kahle emanzini yi-motus (islets) ezungezile. I-lagoon, kanye nempilo yasemanzini eshisayo esezingeni eliphansi, kufaka phakathi oshaka nemisebe, kunikeza amathuba amahle ezinhlobo eziningi zokuzijabulisa ezenzelwe amanzi, ezisukela ekubhukuda, ngokudla izinyoni nokuya esikhumbeni nezinye izindlela uma ufuna ngempela ukuzicwilisa kule ndawo ehlukile.
Ngaphezu kokubona okungaphansi kwendawo yamachibi, isicaba esiphakeme futhi esingakheki ngokungajwayelekile seNtaba i-Otemanu esifinyelela kumamitha we-728 ngaphezulu kwezinga lolwandle, kanye nomakhelwane waso omncane iMount Pahia nazo zihehekile. Ukuhlanganiswa kwesichibi esihle nalezi ziqongo ezihlaba umxhwele kuhlinzeka ngamathuba cishe angapheli wokuthatha izithombe zokuhamba ezizoshiya umngane wakho esekhaya ekuqalekisa ngokuwabelana ngazo.
Bambalwa kakhulu abaya eBora Bora ngezingcezu zomlando. Kodwa-ke, uma usubone okwanele kwichibion, ungafuna ukuthatha izinsalela zezinsalela ezimbalwa ze-WWII kanye nezimpawu zezinto zakudala zasePolynesia kolunye lohambo lwesiqhingi.
Bora Bora Lagoonarium. I-diver eqinisekisiwe isebenza njengomhlahlandlela ongaphansi kwamanzi njengoba ubhukuda futhi ubhekene neziziba, oshaka, imisebe egwazayo nezinye izinhlanzi eziningi ezibiza i-lagoonarium ikhaya lazo. Njengoba igama elithi "… rium" lisho, le ndawo yezentengiselwano iyindawo evinjelwe, evaliwe efana ne-zoo-like, ukuvimba ukunyakaza kwamahhala ngale kwezindawo zokusungulwa. Kulabo abangangeni ekumbizeni, kukhona ongaphansi komhlaba omncane. Abahambi abaningana bavotele lokhu njengokuthanda kwesikhathi sonke.
Kukhona imisebenzi ethe xaxa ngokufanelekile e-Bora Bora ukuze uhlale umatasatasa kunezinye iziqhingi zaseFrance I-Polynesia. Ukuba usizo ngenkathi uvilapha ngaphansi kwelanga ebhishi lesihlabathi esimhlophe, incwadi enhle kuzo zonke izikhathi iyinto ewusizo kakhulu engaletha. Yize iyamangaza njengoba izwakala empeleni kwesinye isikhathi iyana izimvula eBora Bora (futhi kwesinye isikhathi ngisho kakhulu). Iningi lemisebenzi yenzeka ngaphandle, futhi azinamovie, imitapo yolwazi noma iminyuziyamu ongayivakashela, ngakho-ke noma ngabe izindawo zokungcebeleka ezinkulu ziboleka izincwadi nemidlalo, ziletha ukufundwa okuhle.
Ulwandle olushisayo kwesinye isikhathi lufika kwi-30C, luzenze zilungele imisebenzi ehlukahlukene yamanzi. Ukubhukuda echibini lamanzi afudumele acacile anenzuzo yokuba mahhala futhi kungajabulisa kakhulu. Amabhishi aseBora Bora awakhuli nganoma yiziphi izindinganiso, futhi awazigcini mkhuba ngabantu. Ibhishi elidume kunazo zonke, iMatira Beach lisemaphethelweni aseningizimu yesiqhingi esikhulu.
Akudingeki ukhokhe imali eningi ukuze ujabulele iBora Bora. Njengokubhukuda, ukudonswa izinyoka kungenzeka ezindaweni eziningi eziseduzane nolwandle, futhi naseMatira Beach uzobe uzungezwe inhlanzi ezishisayo zase-multicolor ngemizuzwana nasemanzini angajulile. Vele ukhumbule ukuphuma futhi ugqoke i-sunscreen ngezikhathi ezithile njengoba ilanga liqinile futhi uzoshiswa kabi uma uhlala emanzini isikhathi eside.
Ukuvakasha kwe-Jet ski kuzungeze isiqhingi esingaphakathi kuwufanele umzamo njengoba kuvumela ukwazisa ubuhle bemibono ehlukahlukene, yize kwenza umsindo nokungcola.
I-Kite boarding iyaqala ukuthandwa esicini eseningizimu yeMatira.
I-Scuba Diving kuyajabulisa.
Lesi siqhingi singamamayela we-20 amamayela nxazonke, futhi amabhasikidi nezimoto ezincane ayatholakala ngokuqashwa ezindaweni ezahlukahlukene. Kuhle ukutshala imali ukuze ugibele ububanzi besiqhingi.
Ukuvakasha kweJeep kuwufanele uhambo. Uzoba nesikhathi esihle ukhuphuka emizileni ethile emibi kulesi siqhingi, futhi uzothola imibono ethokozisayo. Ngaphezu kwalokho, uzovakashela amanxiwa e-WWII aseMelika, njengokufakwa kwezibhamu kanye nama-bunkers. Izimboni ezimbalwa zezinkampani ezihambela iJeep zinokufinyelela okukhethekile emigwaqweni ehamba ezintabeni ekubukeni okuhle kakhulu, lapho izivakashi nezinye izinkampani ngokuvamile azivunyelwe ukungena.
Kungenzeka ukufinyelela engqungqutheleni yase Mt. UPahia uhamba ngezinyawo, yize kungenabasebenzi baseCity Hall noma abakwaGendarmerie abazokutshela ukuthi kwenzeka kanjani uma ungenaso isiqondisi, njengoba ngisho nabakhweli be-adept belahlekile noma belimele. Qiniseka ukuthi uhlonyelwe kahle, njengoba inzuzo ye-600 m yokuphakama yenzeka ibanga elifushane, futhi qiniseka ukukhomba izihlahla noma amadwala ngentambo ebomvu-emhlophe ezokukhombisa indlela. Ezinye zalezi zingxenye zokugcina zingaba yingozi, ngakho-ke qiniseka ukuthi ugcina ubambhalo wakho futhi unomusa kulabo okungenzeka ukuthi behle ngaphansi kwamadwala awayo ngokungafanele bakhululwe yisithandwa sakho. Ukukhwela izintambo ekugcineni kuyajabulisa! Uma ufuna okuningi, dlulela eningizimu emzileni ongahambelani nokuhamba ngezinyawo ukubukwa kwesakhiwo sodumo.
Uma uthatha isinqumo sokuhambela eBora Bora asikho isidingo sokwethuka mayelana nendawo yokuhlala nokulungiswa. Kunemisebenzi eminingi ebiza mahhala, njengokubhukuda ezindlini zamachibi, ukubhukuda ngamahlengethwa, ushaka nokudla imisebe, nokujabulela ilanga elidumile. Izindawo eziningi zithambekele emanzini, ezingafaka futhi ukushona kwe-scuba kanye ne-snorkeling. Ngaphandle kwemisebenzi yamanzi kuneminye imisebenzi eminingi efana nokuhambisa umkhumbi emanzini, ukudoba olwandle ngokujulile okungenye yezinhlobo zawo emhlabeni njengoba i-Bora Bora iyikhaya lezinhlobo zezilwane zasendle zasolwandle ezingaphezu kwe-500. Kukhona nokuhamba ngezinyawo komndeni nokuhamba ngezinyawo. Engxenyeni yokuphumula lesi siqhingi sigcwele abomdabu abasebenza ngezinsizakalo zokuzivocavoca ngokwesiko. Kukhona futhi ukuhamba kwasolwandle okuyimfihlo, izinkambo zebhasi, nama-hangout amaningi amaMotu. Lesi siqhingi sihlinzeka ngokubona izindiza, kanye nokuvakasha kwendiza enophephela emhlane.
Isiqhingi saseBora Bora sithonywe kakhulu yisiko laseFrance yingakho ukudla okucebile kwasendaweni nokwaseFrance. Futhi banokukhethwa okubanzi kwezindawo zokudlela zomhlaba wonke.
Uma kubhekwa izindleko zakho konke okwenzeka eBora Bora, kwesinye isikhathi okuye kungcolise ukucabanga; kungukukhetha okunengqondo ngokuphelele ukukhohlwa umqondo ojwayelekile wesihambi futhi uthenge ngangokunokwenzeka (kufaka phakathi izitolo) ngaphambi kokufika lapho. Gcina leyo nketho engqondweni uma ufuna ukuzilungiselela.
“Okukhethekile” weBora Bora ngamaparele amnyama. Edume emhlabeni wonke njengeTahiti Black Pearls, amaparele aseBora Bora ayindabuko emadlebeni akude aseFrance Polynesia eSouth Pacific. Namuhla, iTaritan Black Pearls isibe yigugu eliyisimanga elifunwa osaziwayo nelearl aficionados ngokufanayo. Indawo eyaziwa kakhulu lapho ungathenga futhi uzenzele ubucwebe bakho beNsimbi yePearl yiFarm at the Bora Bora Pearl Company.
Azikho izindawo zokudlela eziningi eBora Bora. Abanye abavakashi bangamangala kancane ngomsebenzi (ijubane ngaphezu kwekhwalithi…). Ngaphandle zinamabhodi amakhulu anamagama kubo bonke abantu abadumile abadle lapho.
Hlola i-Bora Bora lapho indlela ethandwayo yokuhlala endaweni yesiqhingi ingobalows. Izindawo eziningi zokungcebeleka zinikeza lolu hlobo lwendawo yokuhlala ngenxa yokuthi kunobuningi bamanzi kunomhlaba. Amanye ama-bungatows angama-totater afaka isitezi esingaphansi kwengilazi futhi aklanyelwe ezindlini zesiqhingi saseBora Bora.